January 5, 2020 - नवयुग
Jan52020 by nawayugaNo Comments
गिजरमा नुहाउने क्रममा बेहोश भइ मृत्यु
ललितपुर । गिजरमा नुहाउने क्रममा बेहोश भइ ललितपुरमा एक जनाको मृत्यु भएको छ । सातदोबाटोस्थित सरिबा गर्ल्स होष्टेल बस्ने पर्साको बीरगंज घर भएकी १९ वर्षीया जोनित चौहानको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । होष्टेलको बाथरुममा गिजरमा नुहाउने क्रममा अचानक बेहोश भएपछि तत्काल पाटन अस्पताल लगिएकोमा उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भएको हो । यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
पूर्वी र पश्चिमी नवलपरासीमा पर्ने पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत दाउन्नेमा सुरुङ मार्ग बन्ने
पुष २०, नवलपरासी | पूर्वी नवलपरासी र पश्चिमी नवलपरासीमा पर्ने पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत दाउन्ने सहित देशको बिभिन्न स्थानमा आधा दर्जन सुरुङ मार्ग निर्माणको लागि अध्ययन तीब्र गतिमा भईरहेको छ । सरकारको प्राथमिकतामा परेका बिभिन्न स्थान मध्ये नवलपरासीको दुम्किबासदेखि बर्दघाटसम्मको सुरुङ मार्ग निर्माणको पनि अध्ययन चलिरहेको छ । नवलपरासीमा बन्ने यो सुरुङ मार्गको लम्बाई ४.९ किलोमिटरदेखि ६.१० किलोमिटर लामो हुनेछ । जुन सुरुङ मार्गको 'सम्भाव्यता अध्ययन' प्रतिवेदन तयार भई निर्माण सम्भव देखिएको छ । यो सुरुङ मार्ग निर्माण ठूलो महत्वको रुपमा हेरिएको बताइएको छ । सरकारले देशका अन्य भूभागमा पनि प्राथमिकताका साथ सुरुङमार्ग निर्माणको कामलाई तीब्रता दिएको छ । नेपालमै पहिलो सुरुङ मार्गको रुपमा हाल काठमाडौँको नागढुङ्गादेखि धादिङको सिस्नेखोलासम्मको सुरुङमार्गको निर्माण कार्य भईरहेको अवस्थ
मलंगवा : नगरपालिकाको तलब भत्ता खाने कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले आफ्ना सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने भन्दै शपथ खाएका छन् । ‘सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुधारौँ आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाऔं’ भन्ने मूल नाराका साथ सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधारको लागि ‘नगर शिक्षा ऐन’ सार्वजनिक तथा शपथ समारोहमा सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले शपथ खाएका हुन् । नगरप्रमुख भरतकुमार थापालाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीप्रसाद उप्रेतीले शपथ खुवाएका थिए भने नगरप्रमुख थापाले स्थानीय कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिलाई शपथ खुवाएका थिए । ‘नगरपालिकामा मलाई प्राप्त जिम्मेवारी मेरो ज्ञान विवेकले जाने बुझेसम्म इमान सम्झी राष्ट्र र मेरो पेशाप्रति बफादार रही कार्य गर्नेछु । म बागमती नगरपालिकाको शिक्षा ऐन र योसँग सम्बन्धित कार्य विवरण पालना गर्दै यस नगरपालिकाभि
गृहकार्य नगरेको भन्दै विद्यार्थीलाई शिक्षकले निर्घात कुटे
गृहकार्य नगरेको भन्दै रुपन्देहीमा शिक्षकको कुटाईबाट एक विद्यार्थी गम्भीर घाइते भएका छन् । सम्मरीमाई गाउँपालिका वडा नम्बर ६ मा रहेको ज्ञानदिप बोर्डिङ स्कूलका शिक्षक शैलेन्द्र बरईले कक्षा पाँचमा अध्ययनरत् विद्यार्थी तौफिक धुनियालाई कुुटपिट गरी गम्भीर घाइते बनाएका हुन् । कुुटाइबाट विद्यार्थी धुनियाको बाँया आँखामा गम्भीर चोट लागेको छ । गएको बुधबार पनि घटना शनिबार मात्रै बाहिर आएको छ । विद्यार्थी कुटपिट गर्ने बरई शिक्षक फरार छन् । सोही दिनदेखि एक हप्ताका लागि विद्यालय बन्द गरिएको छ । गृहकार्य विद्यार्थी धुनियाले गर्न नसकेर विद्यालय जाँदा उनीमाथि कुटपिट गरिएको परिवारले जनाएको छ । विद्यार्थी धुनियाँको उपचार स्थानीयस्तरमा सम्भव नभएपछि थप उपचारको लागि भैरहवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजमा ल्याइएको धुनियाका हजुरबाबा मोहम्मद हुसेन धुनियाले बताए । इलाका प्रहरी कार्यालय मर्चवार
१२२ चिनियाँलाई देश निकाला गर्ने तयारी, नेताले नै गरेका थिए संरक्षण
काठमाडौं । प्रहरीले काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ परेका १२२ चिनियाँलाई देश निकाला गर्ने तयारी गरेको छ । चीनकै सुरक्षा एजेन्सीको सहयोगमा पक्राउ परेका उनीहरुलाई वैधानिक प्रक्रियाबाट स्वदेश लैजान समस्या आउने भएपछि देश निकाला गर्ने तयारी भएको हो । त्यसका लागि उनीहरुको राहदानी खारेज हुनेछ । एक उच्च सुरक्षा अधिकारीले भने,‘‘उनीहरु सबैको राहदानी (पासपोर्ट) खारेज हुनेछ । त्यसपछि उनीहरु अवैध हुनेछन् । अवैध भएपछि देश निकाला गर्ने बाटो खुल्छ र उनीहरुलाई चीन पठाउन सकिन्छ ।’’ चीनकै आग्रहमा उनीहरुलाई देश निकाला गर्न लागिएको सुरक्षा अधिकारी बताउँछन् । पक्राउ परेका सबै चिनियाँ पर्यटक भिसामा नेपाल आएको खुलेको छ । प्रहरीले चीनमा गम्भीर अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा उनीहरुलाई पक्राउ गरेको बताएको थियो । के उनीहरुलाई चीन पठाउने तयारी गरिएको हो ? भन्ने प्रश्नमा सुवेदीले भने, ‘‘यसबारे मलाई जानकारी
के तपाईं घरको जेठो सन्तान हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने तपाईं लागि खुसीको खबर छ । केही समय अघि मात्र गरिएको अध्ययन अनुसार, कुनैपनि परिवारको जेठो सन्तान हुनुका फाइदा धेरै छन् । जर्मनस्थित लिपजिग युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ताहरुले गरेको अध्ययन अनुसार, परिवारको सबैभन्दा जेठो सन्तान अन्य भन्दा धेरै फूर्तिलो र बौद्धिक हुन्छ । अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार, पहिलो बच्चा पछि जन्मिने हरेक सन्तान पहिलोको तुलनामा कम बौद्धिक र फूर्तिलो हुन्छन् । अर्थात् वैज्ञानिकहरुका अनुसार पहिलो भन्दा दोस्रो अलिक कमसल, दोस्रो भन्दा तेस्रो झन् कमसल, चौथौ अझै कमजोर हुने गर्छन् । तर सबैको हकमा भने यो कुरा लागु नहुने बैज्ञानिकहरुको निश्कर्ष छ । अभिभावकहरुबाट पाउने गुण पछिल्ला सन्तानमा कम हुँदै जाने भएकाले पनि पछिका सन्तान हरेक दृष्टिले कमजोर हुने वैज्ञानिकहरुको दाबी छ । अनुसन्धानकर्ताहरुले सयौं बालबालिका माझ
कावासोती (नवलपरासी) । पूर्वी नवलपरासीको कावासोती १४ मा २१ करोडको लागतमा कृषि चिस्यान केन्द्र बन्ने भएको छ । प्रवासबाट आर्जित सिप ज्ञान र पूँजी स्वदेशका लागि भन्ने मुल नाराका साथ स्थापित रिटर्नी कृषि तथा पशुपालन समूह कम्पनी लिमिटेडले तीन हजार मेट्रिक टनको चिस्यान केन्द्र गराउन थालेको हो । चिस्यान केन्द्र निमार्णको सबै प्रक्रिया पुरा गरी माघ ४ गते शिलन्यास गर्ने कार्यक्रम रहेको रिटर्नी कृषि तथा पशुपालन समूह कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष नेत्र नारायण थनेतले जानकारी दिए । संघीय सरकारको ५० प्रतिशत, गण्डकी प्रदेश सरकारको २० प्रतिशत सहयोग र बाँकी बिदेश गएर फर्केका देशैभरीका युवाहरुको लगानीमा गरी २१ करोडको लागतमा चिस्यान केन्द्र निमार्ण हुन लागेको थनेतले बताए । काठमाण्डौं बाहिर पहिलो पटक ब्यवस्थित प्रबिधियुक्त चिस्यान केन्द्र निर्माण हुन लागेको हो । चिस्यान केन्द्रमा सिजनमा उत्पादित फलफुल तथा ख
नवलपुर ,पौष २० । कावासोतीमा आज आइतबार बिहान ८ बजेको समय गैंडा मृत फेला परेको छ । बस्यक गैंडा कावासोती १० रतवलमा मोहनीलाल पंथिको तोरी बारीमा मरेको अवस्थामा भेटीएको हो । स्थानियले बिहान गैंडा देखेर हल्लाखल्ला गर्दा समेत गैंडा नचलेपछि गैंडा मरेको पत्ता लागेको हो । गैडा मर्नुको कारण आधिकारी रुपमा थाहा नभएकोे लामीचौर वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वासुदेव पौड्याले जानकारी दिनुभयो ।
एशियाकै लामो झौलुङ्गे पुल
बागलुङ पर्वतको कुश्मा जोड्ने ५६७ मिटर लामो पोखरा, पुस । दुई दशक अगाडिदेखि चर्चामा रहेर असम्भव भनिएको एसियाकै लामो झोलुङ्गे पुलको निर्माण निर्धारित समय भन्दा एक वर्ष अगाडि नै सम्पन्न हुने भएको छ । २०७७ चैतमा सम्पन्न गर्नेगरी बागलुङ बजारको बाङ्गेचौरदेखि पर्वतको कुश्मा नगरपालिका वडा नं. १ पाङ जोड्ने ५६७ मिटर लामो उक्त पुल निर्माण सुरु गरिएको पुल २०७६ फागुन भित्रै सम्पन्न हुने भएको हो । सात करोड ९७ लाख रुपियाँको लागतमा निर्माण सुरु गरिएको पुलको ९२ प्रतिशत काम सम्पन्न भएकाले निर्माण सक्नुपर्ने अवघिभन्दा एक वर्ष अगाडि नै सम्पन्न हुन लागेको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन कार्यालयका प्राविधिक टोपबहादुर बानियाँले जानकारी दिए । लामो समयदेखि उक्त स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने चर्चा चलेपनि लठ्ठा तान्ने प्रविधि नभएकाले रोकिएको थियो । नेपालमा ३६० मिटर भन्दा माथिका पुल निर्माण नभएको र प्रविधि स